Banyere Anyị - Dingzhou Meiao Bubata na mbupụ ahia Co., Ltd.
Nwebata ụlọ ọrụ
Dingzhou Meiao Bubata na mbupụ ahia Co., Ltd. Ọ bụ ụlọ ọrụ egwuregwu ọkachamara nke nwere ahụmịhe ọrụ ụlọ ọrụ afọ 24. Ọ nwere akụrụngwa mmepụta ọkachamara, ikike nnwere onwe nke nyocha na mmepe, otu nwere ahụmịhe, ahịa ahịa dị mma na nsuso ahịa ahịa zuru oke. Enwetara ntụkwasị obi na nkwado nke ndị ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ na -arụkarị ngwaahịa bụ mgbịrịgba aka, dumbbell, mgbịrịgba kettle, ogwe mgbịrịgba, akụkụ ndị nwere akụkụ, ihe ngosi na ọtụtụ ngwa mma. Ọzọkwa nwere ike ịnweta ODM na OEM dị ka ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ si dị. Anyị nwere ngalaba njikwa njikwa ọkachamara iji soro iwu nke nwere ike ịnye ọrụ kacha mma yana ọrụ kacha enye afọ ojuju maka ndị ahịa niile.
Ụlọ ọrụ ahụ na-akwado “ịchụso ihe kacha mma, akwụsịkwala” mmụọ nke ụlọ ọrụ, nke na-elepụ anya n'ihu.
A na -ebupu ngwaahịa anyị na United States, Russia, Germany, United Kingdom, Australia, Greece, Chile, Taiwan na ụfọdụ obodo na mpaghara ndị ọzọ. Enwere ekele nke ukwuu nke nwere ike ịnata nzaghachi dị oke ọnụ na otuto otu olu.
Ọ bụ nchụso anyị ebighebi nke ga -abụ ụlọ ọrụ ọkachamara kacha mma, nweta afọ ojuju ndị ahịa dị elu ma nye ndị ahịa uru na -enwetụbeghị ụdị ya.
Ime ihe n'eziokwu bụ ntọala ụlọ ọrụ anyị. Nabata ndị na -ere ahịa n'ụlọ na mba ofesi ileta ụlọ ọrụ anyị. Anyị na -atụ anya ka anyị na gị nwee mmekọrịta mmekọrịta enyi na enyi. Anyị nwere ekele maka nkwado na okwukwe gị, nke ga -abụ mkpali anyị inwe ezigbo nkwado n'ọdịnihu.